Isiokwu a na-akpọ “Ndi na-eto eto nwere genetically na-adịghị ike spam?” e dere site Hannah Devlin, sayensị mmekorita, n'ihi na theguardian.com on Wednesday 18 February 2015 06.01 UTC
Teenage ụmụ nwoke ama nwere ọtụtụ nchegbu banyere: tụrụ, ụmụ agbọghọ na ha hà "ihe", dị ka Adrian Mole nwere ike na-etinye ya. Ọ nsogbu nke nwere genetically na-adịghị ike na nwa spam mkpa n'ezie-atụkwasịkwara ndepụta a?
Ọkà mmụta sayensị na Mahadum nke Cambridge ẹdọhọ nke a bụ ikpe mgbe arụ a na-amụ na-agụnye ihe karịrị 24,000 nne na nna na ụmụ ha. The analysis lekwasịrị anya obere mkpụrụ ndụ ihe nketa dị iche iche n'etiti nne na nna na ụmụ, nke na-chere ka a ga-kpatara na-edegharị na njehie na egg ma ọ bụ spam sel.
The ọmụmụ na-egosi na, na nkezi, nna agafe na dịkarịa ala ugboro isii dị ka ọtụtụ n'ime ndị a na mmụba ụmụ ha dị ka ndị nne. Nke a na-atụ aro spam DNA bụ a na-erughị kwesịrị ntụkwasị obi replication nke nna mkpụrụ ndụ ihe nketa usoro, eleghị anya n'ihi na sperm sel undergone ọzọ nkewa karịa nwanyị egg cell site na oge tụụrụ ime etịbe.
Ndị ọzọ na-azọrọ pụtara ìhè - na onye na nwetara ọtụtụ anya - bụ na njehie ọnụego ke spam sel nke afọ iri na ụma ụmụ nwoke bụ ihe 30% elu karịa na-eto eto na ndị ikom.
Ndị nnyocha na-ekwu nke a nwere ike ịkọwa ihe mere ụmụ nke afọ iri na ụma nna nwere elu n'ihe ize ndụ nke ọrịa dị otú ahụ dị ka autism, isi mgbaka na spina bifida.
The akwụkwọ Chepụtara, Peter Forster, kwuru: "Ụmụaka na nke 15 afọ ụmụ nwoke nwere banyere 30% ọzọ mmụba karịa ụmụaka na-eto eto ndị ikom. Ọ bụ a J ekara nkesa. "
Nke a na-eleghị anya sụgharịrị ka a ize ndụ nke nwa ntụpọ nke banyere 2% n'ihi na afọ iri na ụma ụmụ nwoke, tụnyere na nkezi ize ndụ nke 1.5%, o kwuru, sị.
Forster kwuru: "Ọ pụrụ ịbụ na dum spam mmepụta usoro ọzọ bụ njehie-adịkarị mfe ná mmalite ... na ya dị nnọọ na-adịghị kachasị ma."
O kwuru na tiori ọbụna kpaliri echiche, ọzọ nta akụkọ, na ọ bụrụ na afọ iri na ụma nwoke masturbated ọzọ, ha nwere ike na-arụ ọrụ ha n'ụzọ site na nke a "suboptimal" oge ọzọ ngwa ngwa.
Tupu afọ iri na ụma na-aṅa ntị na nke a tụrụ aro (adịghị ha ugbua itinye nnọọ a otutu oge ọrụ a?), ọ bụ ọnụ ahịa na-achọ na akwụkwọ onwe ya, na Royal Society Journal Proceedings B.
The iberibe ihe zuru ezu enweghị nke J ekara usoro. Ebe a bụ eserese, nke anya dị ka a ogologo akara m.
Germline str mutation ọnụego maka nne na nna. Foto: Obodo nke Royal Society
Ọ bụ eziokwu na ndị data mgbe n'ihi na afọ iri na ụma ụmụ nwoke nwere ike na-egosi a dịtụ elu ọnụ ọgụgụ nke mmụba karịa na maka 20- 30 afọ afọ nso, ma ọ ka na-egosi na yitewere na 95% obi ike nkeji maka linear emekarị. M na-apụghị ịhụ ihe ọ bụla na ya ikwubi na "sel nke izizi nke nwa nwoke bụ onye, ​​ma e wezụga ndị merela agadi na-achị", dị ka ndị na-eme.
Ọ bụrụ na ị na-aga ka ha gbadaa na ụzọ, ị nwekwara ike na-eche ihe mere spam aga a bit dodgy na 30, ma mgbe ahụ, ọnyá ọzọ na obibia nke n'etiti afọ, n'ihi na e nwere yiri ka a ọgọ na 30-35 Atiya. A mfe nkọwa bụ na data dị a bit oké ụzụ.
Allan Pacey, prọfesọ andrology na Mahadum nke Sheffield, kwenyere: "Nke a adịghị eme ka uche m. Anaghị m ahụ a J ekara mmekọrịta na, na okwu nke ndu, M nwere ike na-eche ihe ọ bụla ga-akọwa ya. "
Forster na-ezo aka ọtụtụ bi ọmụmụ, nke na-egosi na afọ iri na ụma nna nwere ike ịbụ ihe o nwere inwe ụmụ dị iche iche ọrịa. Ma, ọ bụ ike ikwu ma otú ahụ pụta na-jikọrọ ya kpọmkwem mkpụrụ ndụ ihe nketa na-akpata ma ọ bụ na-elekọta mmadụ na gburugburu ebe obibi ihe. Maka m, a ọhụrụ studydoes bụghị ime ihe dị ukwuu iji dozie nsogbu ahụ. Dị ka Pacey kwuo ya: "M na-adịghị ahụ ihe ọ bụla oké nchegbu maka afọ iri na ụma Iruo."
Na ndị na-eto eto ụmụ nwoke ndị na-abụghị Iruo, e na-eleghị anya ndị ọzọ mere-echere ruo mgbe ha 20s iwagide nna.
← Previous Post Sony SmartWatch 3 Ndenye Review [Na] →